कुलमान घिसिङ भन्नु हुन्छ – ‘३ वर्ष पछि कसैले अन्धकार झेल्नु पर्दैन , बिजुलीकाे महशुल आधा सस्तो हुँदैछ’ …हेर्नुहोस भिडियो. सम्मान स्वरूप सक्दो सेयर गरौ::Point Nepal
कुलमान घिसिङ भन्नु हुन्छ – ‘३ वर्ष पछि कसैले अन्धकार झेल्नु पर्दैन , बिजुलीकाे महशुल आधा सस्तो हुँदैछ’ …हेर्नुहोस भिडियो. सम्मान स्वरूप सक्दो सेयर गरौ
सरकार वा सबै क्षेत्रले चाहना गरेमा भने आफूले गरिरहेको कार्यलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो । तीन वर्षमा हरेक नेपालीको घरघरमा बिजुली पुर्याइने घिसिङले दाबी गर्नुभएको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकाे बेला तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आफूलाई यो स्थानमा अवसर दिएको उहाँकाे भनाइ छ ।
घिसिङले आफ्नो कार्यकालका सबै सरकार र सम्बन्धित निकायले सहयोग गरेका आज देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताउनुभएको छ । बिजुलीको महशुल आधा सस्तो बनाउने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको र छिट्टै घरायासी सँगै औधोगिक महशुल समायोजन हुने उहाँले बताउनुभयो ।